Wararka - Qeybtii koowaad ee tababarka maaraynta caafimaadka Sanxin
Sannadka gaarka ah ee "faafa", waxaan markii ugu horreysay qornay "Xinhuo" iyada oo loo marayo dariiqa daruurta oo waxaan la nimid reer Sanxin bishii Juun 28. Talent waa aasaaska shirkadda. Xoghayaha Guud Xi wuxuu si isdaba joog ah ugu nuuxnuuxsaday in hibada ay tahay ilaha istiraatiijiyadeed ee lagu xaqiijinayo dib u soo nooleynta qaranka isla markaana loogu guuleysto hindisaha tartanka caalamiga ah Sanxin ahaan, hibooyinka ku habboon Sanxin ayaa ah isha laga dhisi karo aasaas qarnigii hore aasaas u ahaa shirkaddu inay ahaato mid aan laga adkaan karin.
Badhanka nolosha waa in lagu xiraa bilowga. Haddii badhanka hore khaldamo, inta kale way khaldami doontaa. Wejigii lixaad ee Sanxin ee “Xinhuo plan”, shirkaddu waxay dejisay qorshe tababar oo faahfaahsan, kaas oo lagu duray xariifnimo maalintii ugu horreysay ee shaqada. Laga soo bilaabo tababarka dibadda ee ku xiran iskaashiga kooxda, laga bilaabo ka-gudubka doorka illaa qorsheynta xirfadda, laga bilaabo dhaqanka shirkadaha illaa maaraynta iyo nidaamka xakamaynta, laga bilaabo sheekada Sanxin illaa mustaqbalka Sanxin, laga bilaabo maamulayaasha shirkadaha ilaa kuwa ganacsiga, macallimiinteennu dhammaantood way ogyihiin wax walba, iyo "Xinhuo" waa heegan ah oo aan daalin.
Sidii hore loo yidhi, "aabuhu wuu dhashaa, macallinka ayaa wax bara.". “Macallin” maahan oo keliya inuu bixiyo aqoon iyo xirfado, laakiin sidoo kale wuxuu ku darayaa dareen daacadnimo ah oo waalidku ka walwalsan yahay iyo waxbariddiisa. Qeybtii hore, waxaan qabanay xaflad weyn oo cibaadada macallinka, taas oo aan ahayn xaflad oo keliya, laakiin sidoo kale tallaabo muhiim u ah mustaqbalka Guan Peisheng. Horaa loo yidhi, "dhageysiga hadalkaaga ayaa ka wanaagsan akhriska toban sano". Baruhu wuxuu noo noqon doonaa hagaha aan ku fureyno goobta shaqada.
Tababarka koorsada ganacsiga
Lecture Macallimiinta qaar
"Waxay ku qoran tahay warqad kaliya inaad dareemi doonto hoos-u-dhac dhamaadka maalinta, waana inaad ku celcelisaa." Sanxin waxay si firfircoon uga jawaab celisay oo ay si buuxda u hirgelisay dhismaha ciidan faro badan oo aqoon ku saleysan, xirfadlayaal iyo hal-abuur leh, horay u sii waday ruuxa shaqaalaha tusaalooyinka iyo farsamayaqaannada ah, waxayna abuurtay qaab bulsho oo shaqaale sharaf leh iyo jawi xirfadeed oo ku dadaalaysa kaamilnimada . Wixii aan baranay maahan inay ku ekaadaan buugaagta ama madaxa, laakiin waa in lagu dhaqan galiyaa ficil iyo qiimeyn abuur. Waa inaan gaarnaa midnimada aqoonta iyo ku dhaqanka, baranaa aqoonta dhabta ah isla markaana fahamnaa macnaha dhabta ah ficil ahaan, ku dhiirrigelinnaa ficil aqoon iyo raadinta aqoonta adoo sameynaya.
“In kasta oo waddadu dhowdahay, haddana ma qaban karno; xitaa haddii arrintu yartahay, macquul maahan. ” Shirkad kasta, ha weynaato ama ha weynaato, waxaa lagu sameeyaa aasaas hoose oo xoogaa yar. Waa inaan noqono qof adag oo waxqabad leh, si adag ushaqeyno una dadaalno. Xinhuo wuxuu bilaabayaa dab shidan, oo aan la diidi karin. Dadka Sanxin waa inay ku adkaystaan ​​himilooyinkooda iyo waxay aaminsan yihiin, leeyihiin himilooyin sare, inay noqdaan kuwo dhulka hoose ku socda, oo ay noqdaan isbeddellada xilliyada. Dhaqanka muuqda ee lagu xaqiijinayo riyada Sanxin ee Sanxin, waa inay sii daayaan riyadooda dhalinyarada, oo ay sameeyaan dadaal aan kala go 'lahayn oo ay ku qorayaan cutubyada midabada leh ee nolosha ee horumarinta caafimaadka dadka!